Waaxda & Expert - Hospital Shijiazhuang Yiling
isbitaalka Yiling Chinese waa heerka ugu sareeya ee isbitaalka Shiinaha ee gaarka loo leeyahay dawooyinka dabiiciga ah Chinese. Kooxda khabiir xoogan oo isbitaalka ka kooban yahay 29 aqoonyahano ah Chinese Academy of Sciences iyo doctorate iyo khubaro dibada soo laabtay. isku dhafan ee therapy Chinese iyo Western leeyahay habab gaar ah daaweynta iyo saamaynta daweyn lagu daweeyo cudurada caadiga ah ee kala duwan, cudurrada iyo cudurrada daran.
Gaar ah u gaarka ah ee muhiimka ah ee Gobolka Shiinaha iyo Hebei, sida waaxda muruqa atrophy, waaxda cudurka rheumatic, waaxda diabetes, waaxda nephrotic, waaxda buro iyo waaxaha kale, daaweynta atrophy muruqa spinal, cudurka neuron motor, scleroderma, fibromyalgi, laabotooyinka, diabetes, cudurka kelyaha, dhammaan noocyada kala duwan ee kansarka iyo cudurada kale waa wax iska cad.
daaweynta ku ool ah iyo caawimaad dadka bukaanka ah shisheeye ka badan 20 dal iyo gobollada ee dunida. Waayo, daaweynta cudurka, fadlan nala soo tago fariin ama la xiriir la khubaro.